ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ 0
မီးရထား၏ Sark Enterprises
သြဂုတ်လ 14 1869 Lombarda ရဲ့အဆုံးမှာကစည်းမျဉ်း၏မျက်နှာသာအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိပ်ကမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများအကြားဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။ လက်နက်များ၏ထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ခဲ့သည်။
မျဉ်း (14 ကီလိုမီတာ) ၏ Garza သြဂုတ်လ 1944 23-Bashir ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီ ... 14 / 08 / 2012 သြဂုတ်လ 14 1869 Lombarda ရဲ့အဆုံးမှာကစည်းမျဉ်း၏မျက်နှာသာအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိပ်ကမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများအကြားဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။ လက်နက်များ၏ထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ခဲ့သည်။ မျဉ်း (14 ကီလိုမီတာ) ၏ Garza သြဂုတ်လ 1944 23-Bashir ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့ပါတယ် ... 14 / 08 / 2015 ကုမ္ပဏီများအကြားဆွေးနွေးပွဲအဆုံးမှာသမိုင်းသြဂုတ်လ 14 1869 Lombarda ယနေ့ဆိပ်ကမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအစီအစဉ်များ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။ လက်နက်များ၏ထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ခဲ့သည်။ မျဉ်း (14 ကီလိုမီတာ) ၏ Garza သြဂုတ်လ 1944 23-Bashir ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း ... 14 / 08 / 2016 ကုမ္ပဏီများအကြားဆွေးနွေးပွဲအဆုံးမှာသမိုင်းသြဂုတ်လ 14 1869 Lombarda ယနေ့ဆိပ်ကမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအစီအစဉ်များ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။ လက်နက်များ၏ထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ခဲ့သည်။ မျဉ်း (14 ကီလိုမီတာ) ၏ Garza သြဂုတ်လ 1944 23-Bashir ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Babiali နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 17 1907 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီအကြားပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန် ... 17 / 12 / 2012 ယနေ့တွင်အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီနှင့်အတူသမိုင်းဒီဇင်ဘာလ 17 1907 Babiali အတွက်ပဉ္စမခုံသမာဓိရုံးအကြားပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်စပိန်၏ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်မွန် Moret ကြေညာခဲ့သည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Babiali နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 17 1907 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီအကြားပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန် ... 17 / 12 / 2014 ယနေ့တွင်အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီနှင့်အတူသမိုင်းဒီဇင်ဘာလ 17 1907 Babiali အတွက်ပဉ္စမခုံသမာဓိရုံးအကြားပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်စပိန်၏ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်မွန် Moret ကြေညာခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မတ်လ 12 1911 ဟာဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 12 / 03 / 2015 သမိုင်းကိုယနေ့မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကောင့်သို့လက်ထောက်များ၏ကန့်ကွက်ယူကြပြီအဆိုပါအချက်များ။ ဘဂ္ဂဒက်-ဘဆ်ွပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလိုက်လျော line ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား 12 / 03 / 2016 သမိုင်းကိုယနေ့မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကောင့်သို့လက်ထောက်များ၏ကန့်ကွက်ယူကြပြီအဆိုပါအချက်များ။ ဘဂ္ဂဒက်-ဘဆ်ွပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလိုက်လျော line ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား ... 12 / 03 / 2017 သမိုင်းကိုယနေ့မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကောင့်သို့လက်ထောက်များ၏ကန့်ကွက်ယူကြပြီအဆိုပါအချက်များ။ ဘဂ္ဂဒက်-ဘဆ်ွပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလိုက်လျော line ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား 12 / 03 / 2018 သမိုင်းကိုယနေ့မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကောင့်သို့လက်ထောက်များ၏ကန့်ကွက်ယူကြပြီအဆိုပါအချက်များ။ ဘဂ္ဂဒက်-ဘဆ်ွပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလိုက်လျော line ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မတ်လ 12 1911 ဟာဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 12 / 03 / 2012 12 1911 မတ်လဟာဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးဖြည့်စွက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကောင့်သို့လက်ထောက်များ၏ကန့်ကွက်ယူကြပြီအဆိုပါအချက်များ။ ဘဂ္ဂဒက်-ဘဆ်ွပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလိုက်လျော line ကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့ပါတယ် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 14 1911 အရှေ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Babiali နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 17 1907 အရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီအကြားပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန် ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မတ်လ 12 1911 ဟာဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 12 1911 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထား ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မတ်လ 12 1911 ဟာဘဂ္ဂဒက်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. ဂျာမန်နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (354) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (544) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)